လူသားသည်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး pentacontakaitetracopter အတွက်မိုဃ်းတိမ်မှကြာ - သတင်း Rule
လူသားသည်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး pentacontakaitetracopter အတွက်မိုဃ်းတိမ်မှကြာ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “လူသားသည်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး pentacontakaitetracopter အတွက်မိုဃ်းတိမ်မှကြာ” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 4th စက်တင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 12.28 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ရှာဖွေရေးရပ်တန့်: သမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးဗြိတိန်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီ - ပါဝင်တဲ့ယာယီရဟတ်ယာဉ်များ Astrid ထိုင်လျက် 54 Monty Python ရဲ့ Gumbies ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရဟတ်.
youtube က gasturbine101 ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး pentacontakaitetracopter built (အတူနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ 54 ဓါးသွား), လုနီးပါးသုံးမီတာမြေပြင်အထက်ကြောင့်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်, ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သူ၏ကင်မရာမင်းပိုများ.
အဆိုပါယာဉ် 148kg အလေးချိန်, နောက်ထပ် 164kg ရုတ်သိမ်းပေးရန်နိုင်ပြီးအဘို့ပျံသန်းနိုင်သည် 10 မိနစ်, ယင်း၏တီထွင်သူနှင့်အညီ. သူကကမ်ဘာ​​ပျေါမှာအလုံခြုံဆုံးယာဉ်မယ့်ဝန်ခံတယ်, ဒါပေမဲ့သူကပြောပါတယ် 54 "18 လက်မအရွယ်ပန်ကာမှာ 5000 rpm ပါ, အန္တရာယ်ရှိသောသော်လည်း, နေဆဲအများကြီးလျော့နည်းဒါခြောက်လုံးငါးခြေလျင်သူတို့ "ထက်. မိမိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ပလပ်စတစ်အမိုးခုံးကဆက်ပြောသည်င့် - ပန်ကာ "ငါ့ဦးခေါင်းနှင့်အတူတွေကို inline" ဖြစ်ပါသည်ကတည်းက. "ဒါဟာကိုလည်းမိုဃ်းကိုရွာစေအမိုးအကာအဖြစ်နှစ်ဆ,"ဟုသူကဆက်ပြောသည်.
18218	0 အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ (Non-စစ်ရေး), သတင်း, နည်းပညာ
← Huawei က Honor:7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: လျှပ်စစ်ပြက်-အစာရှောင် fingerprint ကို scanner ကိုအတူ-range ကိုအစိုင်အခဲလယ်ပိုင်း Amazon ကဂိမ်းနှင့် 4K TV က streaming Fire ကို update ကိုလွှတ်တင် →